အသက် ၂၀ - ငါရှက်တတ်တဲ့လူကန်လန်ပဲ။ ခုတော့သေချာပြီ။ အစဉ်အမြဲစကားပြောနိုင် မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လွယ်ကူသည် - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၀ - ငါရှက်တတ်တဲ့လူကန်လန်ပဲ။ ယခု: ယုံကြည်စိတ်ချ! အစဉ်အမြဲစကားပြောနိုင် မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လွယ်ကူသည်
ကျွန်ုပ်၏ယခင်ပုံရိပ်ဟောင်း - ရှက်တတ်ခြင်း၊ လူကန်လန်ခြင်း၊ ဘာပြောရမှန်းမသိ၊ အချို့သောလူများနှင့်စကားပြောရန်အဆင့်အတန်းလုံလောက်မှုမရှိ၊ ပျော်စရာ၊ ပျော်စရာကောင်းစေရန်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအတွက်ပြောဆိုရန်အကြောင်းအရာများကဲ့သို့သောဝါသနာများမမှန်ပါ။ နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းခံစားငါ့လုံးဝအဖြစ်မှန်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏လက်ရှိ Self-image ကို: မည်ဟုယုံမှားခြင်း !, လူကန်လန်နှင့် extrovert, အစဉ်အမြဲပြောဆိုနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်ကိုချစ် status ကိုမလိုအပ်ပေမယ့်ဝိရောဓိရသည့်အခါဖြစ်ပါသည်နိုငျသညျ, ငါမိန်းကလေးများနှင့်လူမှုရေးတွေ့ဆုံငါဂုဏ်ယူဖြစ်ကြောင်းကိုမူထူးခြားတဲ့ဝါသနာများ ငါမျှော်လင့်ကြောင်း (ကအလုပ်များနိုက်ကလပ်တွင်သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှာပင်ရုံကျပန်း) အချိန်မရွေးဖွစျနိုငျတစ်ခုခုပါပဲ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်ကာရာအိုကေဘားတွင်ရှိနေပြီးလူတိုင်းကိုစကားပြောခဲ့သည်။ ငါအသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်သီဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မိန်းကလေး ၅-၆ ယောက်ရှိတဲ့အုပ်စုတစ်စုကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါနိုက်ကလပ်သို့သွား။ လိုင်း၌ငါလူတိုင်းကို chatting ခဲ့သည်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ငါလိုင်းအတွက်မည်သူမဆိုစကားပြောကြဘူး! ကလပ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးလူအစုအဝေးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကျွန်ုပ်ကိုရွှင်လန်းစေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်“ အမှန်တကယ်ဘာလဲ” ဟုကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ ထို့နောက်ငါကလပ်ရှိမည်သူမဆိုကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားပြောပြီးကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်စကားပြောမည်။ သူကမိန်းကလေး ၃ ယောက်နှင့်ယောက်ျားလေး ၂ ယောက်ကိုသူထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်လာသည်။ စက္ကန့် ၃၀ မျှအကြာတွင်မိန်းကလေးများပြုံးနေသည်ကိုမြင်ရခြင်းနှင့်အမျိုးသားများကသူတို့၏အသံနိမ့်ကျနေခြင်းနှင့်သူတို့၏အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည် (အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ယောက်ျားတွေဒါပေမယ့်ငါထို့နောက်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောစတင်ပါ။ ၅ မိနစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အပျော်စီးရန်အတွက်သူမကိုမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်မောင်းနှင်နေစဉ်သူ၏သူငယ်ချင်းကသူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပေါ်သို့တွန်းတင်ပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ထည့်ရန်ပြောပါ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက“ Dude ကသွားစမ်းပါ” တိုးတိုးပြောလိုက်သည်။ ငါနဲ့ဘာတူလဲ OH RIGHT, the sex xD” ဒီမိန်းကလေးတွေဟာမနက်စောစောထပြီးအလုပ်သွားကြရတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွေကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီမော်ကွန်းညမှာငါတစ်ယောက်တည်းအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ညလုံးအရက်တစ်စက်မထိခဲ့ဘူး (ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပျော်ဆုံးဆုံးဖြစ်နိုင်သေးတယ်၊
ဤတွင်ကျွန်မရက်ပေါင်းယနေ့ညဉ့်မတိုင်မီအရူးနဲ့တူ realapsed တစ်ခုရှက်စရာလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုမြင်လမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်သင်စိတ်ပညာသီအိုရီနှင့်အကြောင်းအရာများစွာကိုပြောနိုင်သည်။ သို့သော်“ Maxwell Maltz ၏စိတ်ပညာ - ဆိုက်ဘာကွန်ယက်များ” ကဲ့သို့သောစာအုပ်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြည့်ပါ။ သို့သော်အမှန်တရားမှာသီအိုရီသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအရေးယူခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲပါ။ လက်တွေ့ကျခြေလှမ်းများ -
NO FAP သည်သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine ပမာဏကိုသင်မျှတစွာခံစားနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ထိုလှုံ့ဆော်မှုနည်းပါးခြင်းကသင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေနိုင်လျှင်၊ လူမှုရေးပေါင်းသင်းမှု၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သင်မည်မျှခံစားရနိုင်သည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကားပြောတာကြားတာမျိုးခံစားရတယ်။ ငါစာသားအတိုင်းနံရံတစ်ခုနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးသာမန်လူတစ် ဦး နှင့်စကားပြောသကဲ့သို့ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်ငါပြောသောအရာများသည်ဟုတ်မှန်လျှင်အခြားသူများကိုမူငါမစီရင်ပါ။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်ရှိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သို့ခံစားရမည်ကိုနားလည်ရန်မည်သည့်အရာမျှမလုပ်ပါနှင့်။
တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏စိတ်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလက်ခံရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံသောအခါမည်သည့်ပြင်ပအင်အားစုကမျှသင်၏စိတ်ကိုမထိခိုက်စေပါ။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့လုပ်နိုင်ရင်တောင်မင်းတို့ဟာမင်းကိုတူညီတဲ့အတိုင်းအတာအထိအကျိုးသက်ရောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။
လှုပ်ရှားမှု! သငျသညျမိနျးကလေးမြားတွေ့ဆုံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလိုခငျြသမြှအတိုငျး, သင့်ရဲ့အလုပ်, စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်း, ဘာမှသင်အရေးယူနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်အောင်နိုင်သည်ကိုသင့်ဦးနှောက်မှသက်သေအထောက်အထားများကိုစုသိမ်းအရေးကြီးသည်။ ကြောက်လန့်-ထိတွေ့!
ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါလမ်းပေါ်ရှိကျပန်းမိန်းကလေးငယ်များကိုရပ်တန့်ပြီးပရောပရည်လုပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခင်ကကဲ့သို့ပင်လူမှုရေးအရထူးဆန်းသည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သကဲ့သို့ယခုလူအများစုကထိုအရာကိုမလိုက်ဖက်သည့်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ငါချီးမွမ်း, နံပါတ်များ, ပျော်စရာ Adventures နှင့်အခြားအဘယ်သူမျှမတူဘဲမြင့်မားရ။ ၎င်းနောက်လူများသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲစကားပြောရန်လူမှုရေးအရလက်ခံထားသောကလပ်ရှိတစ်ယောက်ယောက်နှင့်သွားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ တကယ်တော့ငါတောင်စဉ်းစားမနေတော့ဘူး။
အဲဒီမှာအဓိကထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့အစားအစာအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ, သကြားနှင့်သင့်ခံစားချက်အပေါ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သောအခြားအမှုအရာတို့ကိုသော်လည်း, ဤ3အလေ့အထများနှင့်အတူရိုးရှင်းသောက start ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နဲ့ကျွန်မကြွင်းသောအရာသဘာဝကျကျထိုအရပ်မှစီးဆင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
အခုငါ MEMORIES ကိုစုဆောင်းပြီး၊ ငါဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်သော Self-Image ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ရန်အတွက်နောက်ထပ် FAP မရှိတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ဥာဏ်များကိုအပြည့်အ ၀ ရယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲကောင်းသောအခြေအနေရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သူမျှမသိသောအချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းသည်ဤလောကမှထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၌စွမ်းအင်များစွာရှိသည့်အတွက် အမြန်ကအရမ်းအားကောင်းတယ်။ မနေ့ကငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ညဥ့်နက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူ့နံပါတ်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးသူမသူငယ်ချင်းရဲ့တောင်ပံတွေကိုတောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့ရဲ့လုပ်ရပ်နောက်ကွယ်မှာစိတ်ဆန္ဒလုံးဝမရှိသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါလိင်ရည်ရွယ်ချက်များဖော်ပြမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ရှိသင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မပြောခဲ့ပါကထိုည၌ပင်လိင်ကိုမလိုချင်ခဲ့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်ရပ်တွေကိုငါအတုလုပ်ပြီးမိန်းကလေးတွေကိုအိမ်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။ သို့သော်သင်ကဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိသည့်အခါကောင်းသောအစာကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ငါစိတ်ထဲမဟုတ်ဘူးပေမယ့်။ သို့သော်သင်သည်ငါ၏အချက်ကိုကြည့်ပါ။
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ မင်းကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲဆိုတာကိုသင်သာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဒီ post ကိုရေးခဲ့တယ်။ ဟုတ်သည်မဟုတ်ပါ FAP သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကိုရယူခွင့်ပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ထိုအခြေအနေတွင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ကြောင့်ပြည်နယ်အံ့သြဖွယ်သောကွောငျ့တစျဖနျငါတပြင်လုံးကိုနေ့အဘို့ပြုံးရုံအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုရဲ့အရင်းအမြစ်နဲ့တူခံစားရနှင့်မှော်အမှုအရာဖြစ်ပျက်, တကယ်အလေးအနက်ထားခြင်းမရှိ FAP ယူပြီးငါသော်လည်းငါ့အမှတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်နေပါသည်! နှင့်ရလဒ်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းလိုက်နာပါ (လုပ်ရပ်တွေကိုစိတ်ကိုသင်၏ပြည်နယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်)
FAP မရွိ - တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း - လှုပ်ရှားမှု (သင်၏လိုချင်သောနယ်ပယ်တွင်) -> ကိုးကားစရာအတွေ့အကြုံ -> ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ် - ပြန်လုပ်ပါ
LINK - Asexual, ဒါပေမယ့် Ladiesman